laacibfm.com » Timo Werner Oo Ka Hadlay Markii Ugu Horeysay Inuu Iska Diiday Man United & Liverpool Si Uu Ugu Biiro Chelsea
Timo Werner Oo Ka Hadlay Markii Ugu Horeysay Inuu Iska Diiday Man United & Liverpool Si Uu Ugu Biiro Chelsea
Timo Werner ayaa sheegay in lacag aysan aheyn wixii ku dhiirogeliyay inuu u wareego Chelsea isagoo sheegay in kooxaha Manchester United iyo Liverpool ay labaduba xiiseynayeen inay kala soo wareegaan RB Leipzig.
Liverpool ayaa ugu cadcadeyd inay gacanta ku dhigo xiddiga Jarmalka xagaagan halka Jurgen Klopp uu xitaa wadahadal kala yeeshay weeraryahanka inuu u soo wareego Anfield.
Laakiin Chelsea ayaa noqotay kooxda 53 milyan ginni kula soo wareegtay Timo Werner horaantii bishaan iyadoo weeraryahanka uu saxiixay heshiis shan sannadood ah oo uu isbuucii ku qaadanayo 170 kun ginni.
24 jirkaan oo xilli ciyaareedka ku dhameystay 34 gool uu u dhaliyay RB Leipzig tartamada oo dhan ayaa la dhacay aragtida tababare Frank Lampard markii uu wadahadal la yeeshay tababaraha Chelsea.
Weeraryahanka ayaa sheegay inuu diirada saarayo inuu koobab ku guuleysto marka uu Stamford Bridge yimaado.
“Waxaan ogolaaday inaan Chelsea ku biiro isbuucyo yar ka hor” ayuu Werner ku yiri wareysi uu siiyay Sportbuzzer.
“Heshiiska ma aheyn mid dhibaato leh sababtoo ah waxaan heystay waqti badan oo aan uga fekero ka hor Korona Fayras. Ma aheyn wax qarsoon in dalabyo badan ay ii yaaleen.”
Markii la weydiiyay xiisaha Liverpool iyo Manchester United, Werner ayaa ku jawaabay: “Waa ay ka mid yihiin. Waxaa jiray kooxo waa weyn oo saxiixeyga u dagaalamayay.
“Qorshaha Chelsea ayaa ii noqday midka ugu fiican, waa midka u fiican ciyaarteyda iyo waayaheyga ciyaareed.
“Lacagta door aad u yar ayay ka qaadatay go’aankeyga. Aniga ahaan lacag iima aheyn go’aanka ugu weyn, haddii aan lacag doonayo waxaan “Chelsea waa koox ka mid ah kooxaha waa weyn ee Yurub. Waxaa jooga xiddigo waa weyn oo tayo leh, waxaan dooneynaa inaan u tartano booska koowaad.
“Hal ilbiriqsi xitaa kama qoomameynin go’aankeyga”